Pouches Digital Yoshicilelo
Ngaphandle kweendleko zamacwecwe okanye iisilinda, ushicilelo lwedijithali lukhetho olukhulu kwiiprojekthi zokuqhutywa okufutshane kunye nee-SKU ezininzi. Itekhnoloji yokushicilela yedijithali ngokwayo ineempawu zokukhawuleza kokushicilela, umgangatho olungileyo, isisombululo esiphezulu kunye nokusebenza okusebenzayo, kwaye uyathandwa lishishini lokushicilela.
Iipesenti eziyi-100 ezinokuphinda zisebenze
Kubathengi abafuna iipakethe ezinokuphinda zisetyenziswe, sinikezela ngeengxowa ezinokuphinda zisebenze ezenziwe nge-mono-material, i-100% ye-polyethylene (PE). Ezo ngxowa zokupakisha zenziwe nge-PE ephindwe kabini enokuthi iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde yenziwe njenge-4 LDPE. Zonke izinto zeepakethi zethu ezinokuphinda zisebenze ezinokuphinda zisebenze kwakhona, iiziphu kunye nezipeki zibandakanyiwe, zenziwe ngezinto ezifanayo, ipolypropylene.
Iipakethi ezibunjiweyo zibonakalisa ukhetho olufanelekileyo lweshelufu kwisibheno sebrendi. Zisebenziseka lula kwaye ziluncedo. Sebenzisa itekhnoloji yokuvelisa kunye nokushicilela okumgangatho ophezulu, iipakethi zethu ezimilisiweyo zinokuyilwa nokuba yeyiphi na iiphakeji zemilo imveliso yakho intle kwimibala eyahlukeneyo kunye nobukhulu.
Ngaphandle kweendleko zamacwecwe okanye iisilinda, ushicilelo lwedijithali lukhetho olukhulu lokubaleka ngokufutshane iiprojekthi kunye nee-SKU ezininzi. Itekhnoloji yokushicilela yedijithali ngokwayo ineempawu zokukhawuleza kokushicilela, umgangatho olungileyo, isisombululo esiphezulu kunye nokusebenza okusebenzayo, kwaye uyathandwa lishishini lokushicilela.
Pouches Side gusseted babe gussets ezimbini icala ibekwe ecaleni emacaleni yeebhegi, nkulu umthamo yokugcina, kukho ukhetho olukhulu ukupakisha umthamo omkhulu weemveliso. Ngaphandle koko, ezi ntlobo zeengxowa zithatha igumbi elincinci ngelixa zisabonelela ngendawo enkulu ye-canvas yokubonisa kunye nokuthengisa uphawu lwakho. Ngeempawu zexabiso eliphantsi kwimveliso, ubomi obunokubambisa iso kunye nexabiso lokhuphiswano lokuthenga, iipakethi zegusset esecaleni ziyinxalenye ebalulekileyo kwicandelo lokupakisha eliguqukayo.
Iipakethi ezisezantsi ezithe tyaba kukutya okupakishwayo kokutya okuthandayo, ukufumana ngakumbi nangakumbi ukuthandwa. Banamagama amaninzi, anjengengxowa yebhlokhi engezantsi, ingxowa yebhokisi, isingxobo sezitena, iibhegi ezantsi zesikwere, njl.Zinamacala ama-5, ukuphucula isibheno seshelf kunye neepaneli ezintlanu zommandla ongaphezulu onokuprintwa ukubonisa imveliso okanye uphawu lwakho ngokufanelekileyo. Ngaphandle koko, iipokethi zebhokisi zizinzile kwiishelufa kwaye kulula ukuzifumba ngokubonelela ngokulula kubathengisi nakubathengi, okuya kukhulisa ukhuphiswano lweemarike, kwaye kufanelekile kulwakhiwo lwebranti yemveliso kunye nokupapashwa kwegama.
Ifilimu yeRollstock ibhekisa kuzo naziphi na iifilimu zokupakisha ezinamathiselwe kwifom yokuqengqeleka. Iindleko eziphantsi kwaye kufanelekile ukubaleka ngokukhawuleza kunye neempahla zabathengi. Sinikezela ngemveliso yefilimu ekumgangatho ophezulu esinexabiso elikhulu ngokobungakanani, izinto kunye nokuthambisa kuzo zonke iintlobo zeemveliso onokuzisebenzisa ngokuthe nkqo okanye ngokuthe tyaba kwifom yokugcwalisa kunye nokutywina umatshini weebhegi ..
Kulula ukuyivula kwaye kulula ukuyivala, cofa-ukuvala iiziphu zezona zintle, ezingabizi mali zinokuphinda zisebenze / zinokuphinda zisebenze kwakhona kwiintlobo ezininzi zeebhegi eziguqukayo, kubandakanya zombini iipakethi zokuma kunye neebhegi ezizizicaba, ezisebenzayo ekuthinteleni ukungcola okanye ukuchitheka. kunye nokugcina ukutsha kwemveliso.
Iipakethi ezintathu zecala lokutywina, ezikwabizwa ngokuba ziipakethi ezicaba, zitywinwe kumacala amabini nasezantsi, kwaye umphezulu ushiywe uvulekile ukuzalisa umxholo. Olu hlobo lwepakethi luxabisa iipakethe ezibiza iindleko, kungekuphela nje kulula ukuzalisa iimveliso kodwa zisebenzisa nezinye izithako. Yeyona ndlela ifanelekileyo yokwenza izinto ngokulula, ukukhonza ungatshatanga, ekutyeni okulula okanye kwiimveliso zesampulu oza kuzisebenzisa njengezipho. Iipakethi eziflethiweyo lukhetho oluthandwa kakhulu ekupakisheni okuphuma kunye nokupakishwa kokutya okungumkhenkce.